Frontier ebido Nonstop Belize Flight si Denver na Orlando
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Belize » Frontier ebido Nonstop Belize Flight si Denver na Orlando
Airlines • Airport • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belize • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Belize Tourism Board na -ele mbido ọrụ Frontier Airlines na Belize dị ka mmụba dị oke mkpa na njikọ mba ụwa.
Ụgbọ elu mbụ ga -apụ na Denver n'elekere 8:36 nke ụtụtụ wee rute Belize na 13:44 pm.
Ụgbọ elu nke abụọ ga -apụ Orlando n'elekere 13:42 nke abalị wee rute Belize na 15:10 pm. Ọ ga -apụ na Belize gaa Denver na 16:15 pm wee rute n'elekere 9:40 nke abalị.
Ọrụ a, nke a ga-enye na mbido naanị na Satọde, ga-abụ afọ niile na ike maka mmụba ọzọ n'ọdịnihu.
The Ụlọ ọrụ nlegharị anya nke Belize (BTB) nabatara ọkwa nke Frontier Airlines na mbido ọrụ na-akwụsịghị akwụsị na Belize site na Denver, Colorado na Orlando, Florida malite na Disemba 11, 2021. Ọrụ ahụ, nke a ga-enye na mbụ naanị na Satọde, ga-abụ afọ niile. na enwere ike maka mmụba ọzọ n'ọdịnihu.
Ụgbọ elu mbụ ga -apụ na Denver n'elekere 8:36 nke ụtụtụ wee rute Belize na 13:44 pm. Ụgbọ elu ahụ ga -apụ na Belize gaa Orlando n'elekere 14:49 nke abalị wee rute na 18:14 pm. Ụgbọ elu nke abụọ ga -apụ Orlando n'elekere 13:42 nke abalị wee rute Belize na 15:10 pm. Ọ ga -apụ na Belize gaa Denver na 16:15 pm wee rute n'elekere 9:40 nke abalị.
Daniel Shurz, onye isi osote onye isi azụmaahịa kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa ozi na Belize City site na nnukwu ahịa US abụọ: Denver na Orlando." Frontier Airlines. "Anyị na-atụ anya ịnabata ndị ọbịa na Belize n'ụgbọ elu Green anyị iji chọpụta ebe pụrụ iche sitere n'okike, anụ ọhịa na ọrụ jupụtara na anyanwụ yana ndị bi na mpaghara na-achọ njem dị ọnụ ala na US"
Kọmitii njem nlegharị anya nke Belize na-ele mmalite nke ọrụ Frontier Airlines na Belize dị ka mmụba dị oke mkpa na njikọ mba ụwa n'ihi na ọ ga-eme ka ndị ọbịa si Western na South-Eastern United States nwee nhọrọ njem ka ukwuu iji nụ ụtọ Belize dị ka ebe ezumike ezumike.
Mgbalị Belize na -eme ka njikọta ụgbọ elu mba ofesi na -akwụrịrị ụgwọ. Ọnwa Mee debara aha ndị ọbịa dị na Belize abalị 19,544 ebe ọnwa June debara aha ndị ọbịa 26,215. Ọnụọgụgụ nke ọnwa Julaị na -aga n'ihu na -aga nke ọma, nke na -egosi na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Belize nọ n'ụzọ mgbake.